Imininingwane yokuvikelwa kwedatha, ukusetshenziswa kwamakhukhi kanye nesitatimende - www.amp-cloud.de
Ukuvikelwa kwedatha, amakhukhi nesikweletu
Shintsha izilungiselelo zokuvikela idatha:
Sebenzisa inkinobho elandelayo ukuvula umbhalo wenothi ekusetshenzisweni kwamakhukhi, ongawasebenzisa ukushintsha izilungiselelo ezihambisana nokuvikelwa kwedatha.
Shintsha izilungiselelo zokusetshenziswa kwamakhukhi
Isibopho mayelana nokuqukethwe kwe-www.amp-cloud.de:
Okuqukethwe emakhasini e-www.amp-cloud.de kudalwe ngokucophelela okukhulu. Asikho isiqinisekiso esinikezwayo ngokunemba, ukuphelela kanye nengqikithi yokuqukethwe. Njengomhlinzeki wesevisi, isibopho ngokuya § 7 Isigaba 1 TMG sokuqukethwe kwakho emakhasini e-www.amp-cloud.de sisebenza ngokuhambisana nemithetho evamile. Ngokuvumelana ne-§§ 8 kuya ku-10 TMG, nokho, asikho isibopho njengomhlinzeki wesevisi yokuqapha ulwazi oludlulisiwe noma olugciniwe lwenkampani yangaphandle noma izimo zocwaningo ezibonisa umsebenzi ongekho emthethweni. Izibopho zokususa noma ukuvimba ukusetshenziswa kolwazi ngokuvumelana nemithetho evamile zihlala zingathinteki. Kodwa-ke, isikweletu salesi sithenjwa singenzeka ngokushesha kusukela esikhathini lapho sazi khona ukwephulwa kwemithetho ethile. Ngokushesha lapho siqaphela ukwephulwa okunjalo kwezomthetho, lokhu okuqukethwe kuzosuswa ngokushesha okukhulu.
Isikweletu maqondana nezixhumanisi ku-www.amp-cloud.de:
Ukunikezwa okuvela ku-www.amp-cloud.de kungaqukatha izixhumanisi zamawebhusayithi angaphandle avela kokunye opharetha be-www.amp-cloud.de abanalo ithonya kokuqukethwe kwabo. Ngakho-ke akukho siqinisekiso esinikezwayo ngalokhu okuqukethwe kwangaphandle. Umhlinzeki ofanele noma opharetha wamakhasi uhlala enesibopho sokuqukethwe kwamakhasi axhunyiwe. Uma sazi ukwephulwa komthetho, lezo zixhumanisi zizosuswa ngokushesha okukhulu.
Okuqukethwe nemisebenzi eyenziwe ngumhlinzeki wewebhusayithi emakhasini e-www.amp-cloud.de ingaphansi komthetho we-copyright waseJalimane. Ukuphinda, ukucubungula, ukusabalalisa kanye nanoma yiluphi olunye uhlobo lokuxhashazwa ngaphandle kwemikhawulo yomthetho we-copyright kudinga imvume ebhaliwe yombhali, umdali noma opharetha. Noma yikuphi ukulandwa namakhophi waleli sayithi kuvunyelwe kuphela ukusetshenziswa kwangasese. Noma yiluphi uhlobo lokusetshenziswa kwezentengiselwano aluvunyelwe ngaphandle kwemvume ecacile yombhali ofanele! Ngokuqukethwe kokuqukethwe okusemakhasini e-www.amp-cloud.de akudalwanga yi-opharetha yewebhusayithi, amalungelo obunikazi abantu besithathu ayabonwa. Ngale njongo, okuqukethwe komuntu wesithathu kumakwe kanjalo. Uma kwenzeka ukwephulwa kwe-copyright kwenzeka, sizokucela ukuthi usazise ngokufanele. Uma sazi ukwephulwa komthetho, okuqukethwe okunjalo kuzosuswa ngokushesha okukhulu.
Ukuvikelwa kwedatha shazi:
Ngubani obhekene nokuqoqwa kwemininingwane kule webhusayithi?
Ngakolunye uhlangothi, idatha yakho iqoqwa lapho uyixhumana nathi. Lokhu kungaba, isibonelo, idatha oyifaka kwifomu lokuxhumana.
Eminye imininingwane iqoshwa ngokuzenzakalela yizinhlelo zethu ze-IT lapho uvakashela iwebhusayithi. Lokhu ikakhulukazi imininingwane yezobuchwepheshe (isb.isiphequluli se-inthanethi, isistimu yokusebenza noma isikhathi sokubukwa kwekhasi). Le datha iqoqwa ngokuzenzakalela ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi yethu.
Unelungelo lokuthola imininingwane ngemvelaphi, umamukeli nenhloso yemininingwane yakho egcinwe mahhala nganoma yisiphi isikhathi. Unelungelo futhi lokucela ukulungiswa, ukuvinjwa noma ukususwa kwale datha. Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi ekhelini elinikezwe kwisaziso somthetho uma uneminye imibuzo maqondana nokuvikelwa kwedatha. Unelungelo futhi lokufaka isikhalazo kuziphathimandla eziphethe kahle.
Amathuluzi wokuhlaziya kanye namathuluzi wesithathu
Lapho uvakashela iwebhusayithi yethu, indlela ohlola ngayo i-surfing ingahlolwa ngezibalo. Lokhu kwenziwa ikakhulukazi ngamakhukhi nezinhlelo ezibizwa ngokuhlaziya. Ukuziphatha kwakho kwe-surfing kuvame ukuhlaziywa ngokungaziwa; ukuziphatha kwe-surfing akunakulandelwa kuwe. Ungakuphikisa lokhu kuhlaziywa noma ukuvimbe ngokungasebenzisi amathuluzi athile. Ungathola imininingwane enemininingwane ngalokhu kumemezelo wokuvikelwa kwedatha olandelayo.
Ungaphikisana nalokhu kuhlaziywa. Sizokwazisa ngamathuba wokuphikisa kulesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha.
Imininingwane ejwayelekile kanye nolwazi oluyimpoqo:
Sithanda ukuveza ukuthi ukudluliswa kwedatha nge-Intanethi (isb. Lapho kukhulunywa nge-imeyili) kungaba nezikhala zokuphepha. Ukuvikelwa okuphelele kwedatha ekufinyeleleni kwabantu besithathu akunakwenzeka.
Inothi ngomzimba onesibopho
Umzimba obhekele ukucutshungulwa kwedatha kule webhusayithi ngu:
Umzimba ophethe ngumuntu wemvelo noma wezomthetho yena, yedwa noma ngokuhlanganyela nabanye, onquma ngezinhloso nangezindlela zokucubungula imininingwane yomuntu (isib. Amagama, amakheli e-imeyili, njll.).
Imisebenzi eminingi yokucubungula idatha ingenzeka kuphela ngemvume yakho eqondile. Ungabuyisa imvume yakho noma kunini. I-imeyili engakahleleki kithi yanele. Ukuba semthethweni kokucutshungulwa kwedatha okwenziwe ngaphambi kokuchithwa kuhlala kungathinteki ekuhoxisweni.
Esimeni sokwephulwa komthetho wokuvikela idatha, umuntu othintekayo unelungelo lokufaka isikhalazo kusiphathimandla sokuqondisa esinekhono. Isiphathimandla esinekhono sokuqondisa ezindabeni zokuvikela idatha yisikhulu sokuvikela idatha sesifunda sombuso lapho inkampani yethu izinze khona. Uhlu lwezikhulu zokuvikela idatha kanye nemininingwane yazo yokuxhumana ingatholakala kulesi sixhumanisi esilandelayo: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Unelungelo lokuba nemininingwane esiyicubungula ngokuzenzekelayo ngesisekelo semvume yakho noma ukugcwalisa inkontileka enikezwe wena noma umuntu wesithathu ngendlela efanayo, efundeka ngomshini. Uma ucela ukudluliswa okuqondile kwemininingwane komunye umuntu ophethe, lokhu kuzokwenziwa kuphela uma kungenzeka ngobuchwepheshe.
Ulwazi, ukuvimbela, ukususwa
Ngaphakathi kohlaka lwezinhlinzeko ezingokomthetho ezisebenzayo, unelungelo lokuthola ulwazi mahhala mayelana nedatha yakho yomuntu siqu egciniwe, imvelaphi yayo nomamukeli kanye nenjongo yokucubungula idatha futhi, uma kunesidingo, nelungelo lokulungisa, ukuvimba noma ukususa le datha. Ungasithinta nganoma isiphi isikhathi ekhelini elinikezwe esazisweni somthetho uma uneminye imibuzo ngesihloko sedatha yomuntu siqu.
Ukuphikiswa kwama-imeyili wokukhangisa
Ngakho siyakuphikisa ukusetshenziswa kwedatha yokuxhumana eshicilelwe kumongo wesibopho esigxilile sokuthumela izinto zokukhangisa ezingaceliwe nolwazi. Abasebenzisi bamakhasi bayaligodla ngokusobala ilungelo lokuthatha izinyathelo zomthetho uma kwenzeka kuthunyelwa ulwazi lokukhangisa lungacelwanga, olufana nama-imeyili kagaxekile.
Ukuqoqwa kwedatha kuwebhusayithi yethu:
Amanye amakhasi we-inthanethi asebenzisa okuthiwa amakhukhi. Amakhukhi awalimazi ikhompyutha yakho futhi awanawo amagciwane. Amakhukhi enza ukwenza ukunikezwa kwethu kube okusebenziseka kalula, kusebenze ngempumelelo futhi kuphephe kakhudlwana. Amakhukhi amafayili wombhalo amancane agcinwe kwikhompyutha yakho futhi agcinwe yisiphequluli sakho.
Amakhukhi amaningi esiwasebenzisayo abizwa ngokuthi “amakhukhi eseshini”. Zisuswa ngokuzenzakalela ngemuva kokuvakasha kwakho. Amanye amakhukhi ahlala agcinwe kudivayisi yakho uze uwasuse. Lawa makhukhi asenza sikwazi ukubona isiphequluli sakho ngokuzayo lapho uvakashela.
Ungasetha isiphequluli sakho ukuze waziswe ngokusethwa kwamakhukhi futhi uvumele amakhukhi ezimweni ngazinye, ungafaki ukwamukelwa kwamakhukhi ngamacala athile noma ngokujwayelekile, futhi wenze ukususwa okuzenzakalelayo kwamakhukhi lapho uvala isiphequluli. Uma amakhukhi engasebenzi, ukusebenza kwale webhusayithi kungavinjelwa.
Amakhukhi adingekayo ukwenza inqubo yokuxhumana nge-elekthronikhi noma ukuhlinzeka ngemisebenzi ethile oyidingayo (isb. Umsebenzi wenqola yokuthenga) agcinwa ngesisekelo sobuciko. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Umhlinzeki wewebhusayithi unentshisekelo efanele ekubekweni kwamakhukhi kokuhlinzekwa kwezinsizakalo zawo okungenaphutha nokwenziwe kahle. Uma amanye amakhukhi (isb. Amakhukhi wokuhlaziya ukusebenza kwakho kokusefa) agcinwa, lawa azophathwa ngokwahlukile kulesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha.
Isigaba sekhukhi "Umsebenzi"
Amakhukhi esigabeni "Somsebenzi" ayasebenza futhi ayadingeka ekusebenzeni kwewebhusayithi noma ukwenza imisebenzi ethile. Lokhu kusho ukuthi abahlinzeki abakulesi sigaba abakwazi ukuvalwa.
"Sebenzisa" isigaba samakhukhi
Amakhukhi esigabeni "sokusetshenziswa" aqhamuka kubahlinzeki abanikezela ngokusebenza okuthile noma okuqukethwe, okufana nemisebenzi yezokuxhumana, okuqukethwe kwamavidiyo, amafonti, njll. Abahlinzeki abakulesi sigaba banomthelela wokuthi ngabe zonke izinto ezisekhasini zisebenza kahle.
"Kukalwa" isigaba sekhukhi
Amakhukhi esigabeni esithi "Isilinganiso" avela kubahlinzeki abangahlaziya ukufinyelela kuwebhusayithi (ngokungaziwa, kunjalo). Lokhu kunikeza ukubuka konke kokusebenza kwewebhusayithi nokuthi ithuthukiswa kanjani. Kulokhu, izinyathelo zingathathwa, isibonelo, ukuthuthukisa isayithi esikhathini eside.
Isigaba samakhukhi "Ezezimali"
Amakhukhi avela esigabeni "Sokuxhasa Ngezimali" aqhamuka kubahlinzeki izinsizakalo zabo ezixhasa izindleko zokusebenza nengxenye yokunikezwa yiwebhusayithi. Lokhu kusekela ukusinda kwesikhathi eside kwewebhusayithi.
Amafayela elogi yeseva
Umhlinzeki wamakhasi uqoqa ngokuzenzakalela futhi agcine imininingwane kulokho okubizwa ngamafayela okungena kweseva, isiphequluli sakho esidlulisela kuwo ngokuzenzekelayo. Lezi izi:
Igama lomgcini lekhompyutha efinyelela
Le datha ngeke ihlanganiswe neminye imithombo yedatha.
Le datha iqoshwe ngesisekelo se-Art. 6 Paragraph 1 lit. f GDPR. Umhlinzeki wewebhusayithi unentshisekelo esemthethweni ekwethulweni okungenasiphambeko ngokwezobuchwepheshe kanye nokwenza kahle kwewebhusayithi yakhe - amafayela we-log log kufanele aqoshwe ngalokhu.
Ama-plugins we-Facebook (inkinobho yokuthanda nokwabelana)
Ama-plugins enethiwekhi yokuxhumana i-Facebook, umhlinzeki we-Facebook Inc., i-1 Hacker Way, iMenlo Park, eCalifornia 94025, e-USA, ahlanganiswe emakhasini ethu. Ungawabona ama-plugins we-Facebook nge-logo ye-Facebook noma inkinobho ethi "Like" kuwebhusayithi yethu. Ungathola ukubuka konke kwama-plugins we-Facebook lapha: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Uma uvakashela iwebhusayithi yethu, i-plug-in isungula ukuxhumana okuqondile phakathi kwesiphequluli sakho neseva ye-Facebook. Ngenxa yalokho, i-Facebook ithola imininingwane yokuthi uvakashele isiza sethu ngekheli lakho le-IP. Uma uchofoza inkinobho ethi "Like" ku-Facebook ngenkathi ungene ku-akhawunti yakho ye-Facebook, ungaxhumanisa okuqukethwe amakhasi ethu nephrofayili yakho ye-Facebook. Lokhu kwenza i-Facebook inikeze ukuvakashelwa kwakho kuwebhusayithi yethu kwi-akhawunti yakho yomsebenzisi. Sithanda ukuveza ukuthi, njengomhlinzeki wamakhasi, asinalo ulwazi lokuqukethwe kwedatha edlulisiwe noma ukusetshenziswa kwabo yi-Facebook. Ungathola eminye imininingwane ngalokhu kwisimemezelo sokuvikelwa kwedatha ku-Facebook ku: https://de-de.facebook.com/policy.php
Uma ungafuni ukuthi i-Facebook ikwazi ukwabela ukuvakashelwa kwakho kuwebhusayithi yakho kwi-akhawunti yakho yomsebenzisi ye-Facebook, sicela uphume kwi-akhawunti yakho yomsebenzisi ye-Facebook.
I-Google + plugin
Amakhasi ethu asebenzisa imisebenzi ye-Google +. Umhlinzeki yiGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ukuqoqwa nokusatshalaliswa kolwazi: Ungasebenzisa inkinobho ye-Google + ukushicilela ulwazi emhlabeni wonke. Wena nabanye abasebenzisi nithola okuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho kusuka ku-Google kanye nozakwethu ngenkinobho ye-Google +. I-Google igcina yonke imininingwane oyinikeze +1 yokuqukethwe kanye nolwazi mayelana nekhasi olibukile ngenkathi uchofoza +1. Ukubeka kwakho +1 kungakhonjiswa njengesethenjwa negama lephrofayela yakho nesithombe sakho kumasevisi we-Google, njengemiphumela yosesho noma kuphrofayela yakho yakwa-Google, noma kwezinye izindawo ezikumawebhusayithi nezikhangiso ezikwi-Intanethi.
I-Google iqopha imininingwane ngemisebenzi yakho ye +1 ukuze ithuthukise amasevisi e-Google wakho nabanye. Ukuze ukwazi ukusebenzisa inkinobho ye-Google +, udinga iphrofayili ye-Google esesidlangalaleni ebonakala emhlabeni wonke okumele okungenani iqukathe igama elikhethelwe iphrofayela. Leli gama lisetshenziswa kuwo wonke amasevisi we-Google. Kwezinye izimo, leli gama lingaphinda lithathe elinye igama olisebenzisile lapho wabelana ngokuqukethwe nge-akhawunti yakho yakwa-Google. Ubunikazi bephrofayela yakho ye-Google bungakhonjiswa kubasebenzisi abazi ikheli lakho le-imeyili noma abanolunye ulwazi olukhombayo olumayelana nawe.
Ukusetshenziswa kolwazi oluqoqiwe: Ngokungeziwe kuzinhloso ezichazwe ngenhla, imininingwane oyinikezayo izosetshenziswa ngokuya ngemigomo esebenzayo yokuvikelwa kwedatha ye-Google. I-Google ingashicilela izibalo ezifingqiwe mayelana nemisebenzi ye +1 yabasebenzisi noma iyidlulisele kubasebenzisi nakumaqabane, njengabashicileli, abakhangisi noma amawebhusayithi axhunyiwe.
Amathuluzi wokuhlaziya nokukhangisa:
Le webhusayithi isebenzisa imisebenzi yesevisi yokuhlaziya iwebhu iGoogle Analytics. Umhlinzeki yiGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
I-Google Analytics isebenzisa okuthiwa "amakhukhi". Lawa ngamafayela wombhalo agcinwa kukhompyutha yakho futhi avumela ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi ukuthi kuhlaziywe. Imininingwane eyenziwe ikhukhi mayelana nokusebenzisa kwakho le webhusayithi ivame ukudluliselwa kuseva yeGoogle e-USA futhi igcinwe lapho.
Ukugcinwa kwamakhukhi we-Google Analytics kusekelwe kubuciko. 6 Para. 1 lit.f GDPR. Umhlinzeki wewebhusayithi unentshisekelo efanele ekuhlaziyeni ukusebenza komsebenzisi ukuze asebenzise iwebhusayithi yakhe kanye nokukhangisa kwayo.
Siqalise ukusebenza kwe-IP ngokungaziwa kule webhusayithi. Ngenxa yalokho, ikheli lakho le-IP lizofinyezwa i-Google emazweni angamalungu e-European Union noma kwezinye izivumelwano ezenza isivumelwano se-European Area Area ngaphambi kokuba idluliselwe e-USA. Ikheli eligcwele le-IP lizothunyelwa kuphela kuseva yeGoogle e-USA futhi ifushaniswe lapho ezimweni ezihlukile. Egameni lomhlinzeki wale webhusayithi, iGoogle izosebenzisa lolu lwazi ukuhlola ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi, ukuhlanganisa imibiko ngomsebenzi wewebhusayithi nokunikeza opharetha iwebhusayithi ezinye izinsizakalo eziphathelene nomsebenzi wewebhusayithi nokusetshenziswa kwe-inthanethi. Ikheli le-IP elidluliswa yisiphequluli sakho njengengxenye ye-Google Analytics ngeke lihlanganiswe nenye idatha ye-Google.
Ungavimba ukugcinwa kwamakhukhi ngokusetha isoftware yakho ngokufanele; kodwa-ke, sithanda ukuveza ukuthi kulokhu ngeke ukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi yale webhusayithi ngokugcwele. Ungavimbela futhi i-Google ekuqoqeni idatha eyenziwe ikhukhi futhi ehlobene nokusebenzisa kwakho iwebhusayithi (kufaka phakathi ikheli lakho le-IP) nasekusebenzeni le datha ngokulanda i-plug-in yesiphequluli etholakala ngaphansi kwesixhumanisi esilandelayo bese uyifaka: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ungavimbela i-Google Analytics ekuqoqeni idatha yakho ngokuchofoza inkinobho engezansi. Lokhu kukhombisa imininingwane nezinketho zokusetha ukusetshenziswa kwamakhukhi, ngokuchofoza "" wenza kungasebenzi, phakathi kwezinye izinto, ukuqoqwa kwedatha yakho ku-akhawunti yethu ye-Google Analytics:
Bonisa izinketho zokucima i-Google Analytics
Ungathola eminye imininingwane yokuthi i-Google Analytics iyiphatha kanjani idatha yomsebenzisi kunqubomgomo yobumfihlo ye-Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Oda ukucutshungulwa kwedatha
Senze isivumelwano sokucutshungulwa kwedatha yenkontileka ne-Google futhi sisebenzise ngokugcwele izidingo eziqinile zeziphathimandla zokuvikela idatha zaseJalimane lapho zisebenzisa i-Google Analytics.
Izici zezibalo zabantu ku-Google Analytics
Le webhusayithi isebenzisa umsebenzi "wezimpawu zabantu" weGoogle Analytics. Lokhu kuvumela ukuthi kudalwe imibiko equkethe imininingwane ngeminyaka, ubulili kanye nezintshisekelo zezivakashi zesiza. Le datha ivela ekukhangisweni okususelwa kuntshisekelo kusuka ku-Google kanye nakwidatha yezivakashi evela kubahlinzeki abavela eceleni. Le datha ayikwazi ukunikezwa umuntu othile. Ungavimbela lo msebenzi nganoma yisiphi isikhathi ngokusebenzisa izilungiselelo zesikhangiso ku-akhawunti yakho ye-Google noma uvimbele ukuqoqwa kwemininingwane yakho yi-Google Analytics njengoba kuchaziwe esigabeni esithi "Ukuphikisa ukuqoqwa kwedatha". Le webhusayithi isebenzisa umsebenzi "wezici zabantu" we-Google Izibalo. Lokhu kuvumela ukuthi kudalwe imibiko equkethe imininingwane ngeminyaka, ubulili kanye nezintshisekelo zezivakashi zesiza. Le datha ivela ekukhangisweni okususelwa kuntshisekelo kusuka ku-Google kanye nakwidatha yezivakashi evela kubahlinzeki abavela eceleni. Le datha ayikwazi ukunikezwa umuntu othile. Ungavimbela lo msebenzi nganoma yisiphi isikhathi ngokusebenzisa izilungiselelo zesikhangiso ku-akhawunti yakho ye-Google noma uvimbele ukuqoqwa kwemininingwane yakho yi-Google Analytics njengoba kuchaziwe esigabeni esithi "Ukuphikisa ukuqoqwa kwedatha".
Le webhusayithi isebenzisa iGoogle AdSense, insiza yokuhlanganisa izikhangiso ezivela kwaGoogle Inc. ("Google"). Umhlinzeki yiGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
I-Google AdSense isebenzisa okuthiwa "amakhukhi", amafayela wombhalo agcinwe kwikhompyutha yakho futhi anika amandla ukuhlaziywa kwewebhusayithi. I-Google AdSense ibuye isebenzise okuthiwa ama-web beacons (ihluzo ezingabonakali). Lezi beacon zewebhu zingasetshenziswa ukuhlola ulwazi olufana nethrafikhi yezivakashi kulawa makhasi.
Imininingwane eyenziwe ngamakhukhi namabhikhoni e-web mayelana nokusetshenziswa kwale webhusayithi (kufaka phakathi ikheli lakho le-IP) kanye nokulethwa kwamafomethi wokukhangisa adluliselwa futhi agcinwe yi-Google kumaseva ase-United States. Lolu lwazi lungadluliselwa yi-Google kozakwethu besivumelwano be-Google. Noma kunjalo, i-Google ngeke ihlanganise ikheli lakho le-IP nenye idatha egcinwe ngawe.
Ukugcinwa kwamakhukhi we-AdSense kusekelwe kubuciko. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Umhlinzeki wewebhusayithi unentshisekelo efanele ekuhlaziyeni ukusebenza komsebenzisi ukuze asebenzise iwebhusayithi yakhe kanye nokukhangisa kwayo.
Ungavimbela ukufakwa kwamakhukhi ngokusetha isoftware yakho ngokufanele; kodwa-ke, sithanda ukuveza ukuthi kulokhu ngeke ukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi yale webhusayithi ngokugcwele. Ngokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma ukucutshungulwa kwedatha eqoqwe ngawe yi-Google ngendlela echazwe ngenhla futhi ngenhloso eshiwo ngenhla.
Leli khasi lisebenzisa okuthiwa amafonti e-web, ahlinzekwa yi-Google, ekubonisweni kwamafonti okufanayo. Uma ubiza ikhasi, isiphequluli sakho silayisha amafonti ewebhu adingekayo kwisilondolozi sesiphequluli sakho ukuze sibonise kahle imibhalo namafonti.
Ngale njongo, isiphequluli osisebenzisayo kufanele sixhumeke kumaseva we-Google. Lokhu kunikeza iGoogle ulwazi lokuthi iwebhusayithi yethu itholakele ngekheli lakho le-IP. Ukusetshenziswa kwe-Google Web Fonts kwenzeka ngenhloso yesethulo somfaniswano nesikhangayo seminikelo yethu eku-inthanethi. Lokhu kubonisa intshisekelo esemthethweni ngaphakathi kwencazelo yobuciko. 6 Para. 1 lit.f GDPR.
Uma isiphequluli sakho singawasekeli amafonti e-web, ifonti ejwayelekile izosetshenziswa yikhompyutha yakho.
Olunye ulwazi ku-Google Web Fonts lungatholakala kokuthi https://developers.google.com/fonts/faq nakunqubomgomo yobumfihlo ye-Google: